पर्यटन व्यवसायमा योग्दान पुर्याउने योजना::Best News Experience from Nepal
रचना पन्त पर्यटन व्यवसायी
रचना पन्त रूपन्देहीको एक सफल महिला व्यवसायी हुन् । घरको काम सँगै व्यवसाय सुरू गरेकी उनी वि.सं. २०३७ सालमा गुल्मी जिल्लाको खज्र्याङ्गमा जन्मिएकी हुन् । वि.सं. २०५८ समालमा रूपन्देहीको देवदहमा स्टेशनरी व्यवसायबाट व्यवसायीक क्षेत्रमा लागेकी उनी वि.सं. २०६३ सालमा सौरभ विविध सेवा, सौरभ राइसमिल सैनामैना हुँदै २०६७ साल देखि यातायात व्यवसामा प्रवेशगरि अहिले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति बुटवलकी कार्यसमिति सदस्य पनि हुन् । उनी रूपन्देही उद्योग संघको पूर्व सदस्य, नविनतम् औद्योगिक सहकारी संस्था लिमिटेडको कोषाध्यक्ष पनि हुन् । उनले नेपालमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास हुन नसकेको भन्दै आफूले अबका दिनमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा लागि समृद्ध नेपाल निमार्णमा सहयोग गर्ने अठोट लिएकी छिन्, उनले अबका दिनमा आफूलाई महिला पर्यटन व्यवसायी बनाउन चाहन्छिन् र बुटवलको मिलनचोकमा सौरभ राइज ट्राभल्स सञ्चालन गरेकी छिन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर उनै पन्तसँग अखबार न्यूजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
सौरभ राइज कस्तो पर्यटन उद्योग हो ?
यो सौरभ राइज पर्यटन उद्योग पर्यटन व्यवसायी सँग सम्बन्धित छ । हाम्रो देश नेपाल पर्यटकीय सम्भावना पनि प्रचुर मात्रामा रहेका छन् । तर ति सबै सम्भावनाको व्यवस्थित रूपमा पहिचान र संरक्षण नहँुदा ओझेलमा परेका छन् । यहाँ भएका ट्राभल्सहरूलाई अहिले जनताको बुझाइमा टिकट बेच्ने काउन्टरको रूपमा परिभाषा गरेका छन् । तर यो मेरो पर्यटन व्यवसायलाई महिले कान्टर भन्नु भन्दा पनि उत्कृष्ट सेवा सुविधा सहितको व्यवसाय बनाएर लैजानेछु । मैले पर्यटन उद्योग मार्फत समृद्ध नेपाल निमार्णको लागि ईट्टा थप्ने काम गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो । यहाँ आउने पर्यटकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा भिन्न तरिकाको व्यवस्था पाउनुहुनेछ । पर्यटकलाई छिटो छरितो रूपमा सहज ढंगबाट पर्यटकीय क्षेत्र घुमाउने व्यवस्था रहन्छ ।
यहाँबाट कहाँ कहाँ सम्मको पर्यटकीय व्यवस्था मिलाउनु भएको छ ?
पहिलो चरणमा विश्व सम्पदामा सुचिकृत लुम्बिनी, तिलौराकोट घुमाउने व्यवस्था रहेको छ । पाल्पा जिल्लाको सुन्दर ताल सुकेताल र होमस्टे, प्राकृतिक रमणीय क्षेत्र गुल्मीको रेसुङ्गा, अर्घाखाँचीको धार्मिक स्थल सुपादेउराली र पोखरा सम्मको टुर्स प्याकेजहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यहाँले पर्यटकोलागि गाइडको व्यवस्था गर्नु भएको छ की ? गाडि बुकिङ्ग गरेर मात्र पठाउने हो ?
नेपालमा पर्यटकीय सम्भावना धेरै छन् तर अव्यवस्थित रूपमा रहेका छन् । हाम्रो देशमा आउने पर्यटक कोही धार्मिक कोही ऐतिहासिक पर्र्यटकहरू हुन्छन् । विश्वबाट पर्यटकहरू आउने भएकोले सबै भाषामा बोल्ने गाइडहरू पाउन पनि मुस्किल रहेको छ । पर्यटकहरू पनि आन्तरिक र बाह्य गरि प्रकारका छन् । आन्तरिक पर्यटकको लागि र अंग्रेजी, कोरियन, चाइनिज, जापानिजकालागि भाषाको गाइडको व्यवस्था गरि पठाइन्छ । पर्यटन उद्योग भइसकेपछि गाइडको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ जसका लागि लुम्बिनी विकास कोष सँग समन्वय गरि अगाडि बढाउँछौं ।
तपाई महिला पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ नेपालमा पर्यटकको सम्भावना र चुनौति कस्तो देख्नु भएको छ ?
नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको ठूलो चुनौतिपूर्ण कार्य नै हो । यहाँ आउने पर्यटकहरू बिदेशी नै हुन्छन्, उनीहरूलाई विदेशी सेवा र सुविधा दिन सकेमा बसाई लामो हुने र धेरै ठाउँमा घुम्ने गर्दछन् । सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन् तर ति सबै अव्यवस्थित ढङ्गका हुँदा तिनको समाधान गर्न निकै चुनौति रहेको छ । नेपाली समाजमा मात्र नभई यसको प्रचारप्रसार विदेशमा समेत गरिनु पर्दछ । सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिई पर्यटकलाई घुमाउन गाइडको व्यवस्था गरेमा ति चुनौतिको सामना गर्न सकिन्छ ।
तपाईं एक महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ ? घर परिवारबाट सहयोग पाउनु भएको छ, छैन ?
कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । व्यवसायमा घर परिवारको सहयोग हुन सकेन भने सफल व्यवसायी बन्न सकिँदैन । हाम्रो समाजमा भन्ने हो भने महिला व्यवसायी कम मात्रामा हुनुहुन्छ । मलाई मेरो घरपरिवारबाट राम्रो सहयोग भएकोले म एक कुशल महिला उद्योगी बन्न पुगेकी छु ।
नेपाल सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई कुन रूपमा हेरेको पाउनुहुन्छ ?
मैले बुझेँ जाने अनुसार पर्यटन विकास नै नेपालको आर्थिक मेरूदण्ड हो । सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनको लागि तालिम, सेमिनार कुनै गर्न सकेको छैन । कुरामा एकदमै राम्रो छ तर व्यवहारमा लागु गर्न सकेको छैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो तरिकाले परिभाषित गरिदिएको छ तर कानुनी प्रक्रिया जटिल बनाइदिँदा फस्टाउन सकेको छैन ।
आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसायलाई कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?
राज्यले पर्यटन व्यवसायी र पर्यटकको सुरक्षा र ग्यारेण्टी दिन सके पर्यटन क्षेत्रमा नसोचेको सफलता हात मिल्नेछ । पर्यटन विकासका लागि पर्यटन व्यवसायीहरुको भ्वाइस एउटै बनाउने वातावरण हामीबाटै शुरु गर्न जरुरी छ । जसको लागि एकता र एकजुटको भावनाको विकास गरौं । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी र खर्च गर्ने अभ्यासको सुरुवात आफैबाट गर्न जरुरी छ, । भुकम्प र वर्तमान असहज राजनीतिक अस्थीरताले नेपालको पर्यटनक्षेत्र धरासायी बन्यो भन्ने होइन समस्या समाधान र पर्यटनको सम्भाव्यता विश्वस्तरसम्म पुर्याउन सजिलो बनाउनेछ भन्नेतर्फ हामी सबैको मानसिकता जानुपर्दछ । म यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढ्छु ।
विश्व शान्तिको चिनारी लुम्बिनीमा पर्यटको गाइडको व्यवस्था भएको छैन । आन्तरिक वा बाह्य जो सुकै पर्यटक भएपनि गाइडको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विदेशबाट आएका पर्यटकहरू अहिले गाइडको समस्याका कारण छोटो समयमै नेपाल बसाई गरि फर्कने गरेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी मात्र नभई लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्ला पर्यटकीय रहेका छन् ।
ति सबै क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएर सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक पु¥याउनु जरूरी देखिन्छ । अबका दिनमा यहाँका उद्योगी व्यवसायी सँग मिलेर देश निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रबाट ईट्टा थप्ने काममा सबै पर्यटन उद्योगीहरू एकजुट हुन आग्रह समेत गर्दछु ।